Madheshvani : The voice of Madhesh - संविधान संशोधन नभए फेरि संघर्षमा जान्छौं : उपेन्द्र यादव
संविधान संशोधन नभए फेरि संघर्षमा जान्छौं : उपेन्द्र यादव
रौतहट, ७ पुस । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं संघीय सरकारका उपप्रधान तथा स्वास्थ्यमन्त्री उपेन्द्र यादवले संविधान संशोधन नभए पुनः आन्दोलनमा जाने चेतावनी दिएका छन् ।
विगतमा भएका सहमतिमा संविधान संशोधनको कुरा स्पस्टरुपमा उल्लेख रहेको बताउँदै माग सम्बोधन नभए फेरि संघर्षको बाटो अपनाउने चेतावनी दिए ।
मधेश आंदोलनको भीषण संघर्षको विरुद्ध बल जवर्दस्ती लादिएको संविधान त्रुटिपूर्ण संविधानलाई संशोधनको माध्यमबाट सर्वस्वीकार्य संविधान बनाउनु पर्ने जरुरी रहेको बताएका छन् ।
उनले वर्तमान संविधान उत्पीडनमा परेको समुदायको विपरीत रहेकोले यसलाई जनताको लागि तुरुन्त संशोधन गर्नु पर्ने जोड़ दिए ।
संघीय सरकारको मन्त्री भएपछि पहिलो पटक रौतहट जिल्ला आएका अध्यक्ष यादवले माधव नारायण नगरपालिकाको कार्यालयमा संघीय प्रेस फोरम जिल्ला कार्य समिति रौतहटले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सम्बोधन गर्दै त्रुटिपूर्ण संविधानलाई संशोधन, सुधार गर्दै सबै जनताको संविधान बनाउनु पर्ने आग्रह गरे ।
संघीयताको मजबुत बनाउनका लागि नयाँ कानून बनाउन जरुरी रहेको जिकिर गर्दै पुरानो कानूनलाई संशोधन गर्नु पर्ने आजको आवश्यकता भएको उल्लेख गरे ।
नेपाल विश्वको सबैभन्दा विपन्न मुलुकको सूचिमा रहेको र प्रदेश २ पनि अति पिछडिएको प्रदेशको रुपमा रहेकोले यसको निदानका लागि आर्थिक विकास हुनुपर्ने जोड दिए ।
मधेशको समस्या नागरिकताको मुद्दा संसदीय समितिबाट विधेयक पास भएपछि नागरिकताको समस्याको हल हुने बाटो खुल्ने बताए ।
नेपालमा मेजर रुपमा तीन समुदाय पहिलो मधेशी दोस्रो जनजाति र तेस्रो खासआर्य मूल चुनौतीको रुपमा रहेको छ ।
मधेशी र खसआर्य एउटै देशको नागरिक भएकोले विभेद किन ? यति पिछडिएको किन ? विभेद र असमानताको शिकार किन ? बराबरको हकÞ, अवसर किन दिँदैन, सत्ता शासनमा भागिदारी किन हुँदैन ? आदिवासी, जनजाति लगायत अन्य समुदायको स्थिति राज्य विहीनताको रहेको टिप्पणी गरे ।
तिनै समुदायलाइ समानता, अवसर, हकÞ अधिकारी हुनु पर्ने हाम्रो प्रयास रहेको बताउँदै स्वास्थ्य मन्त्री यादवले विभेद असमानता अन्त भएमा मात्र मुलुक शाति, समृद्धि विकासको मार्गमा अघि बढने ठोकूवा गरे ।
फोरम राजपा एकताको प्रसंगमा मन्त्री यादवले फोरमले एकताको प्रस्ताव अघि सरेर राजपाको समक्ष बढाएको बताए । उनले भने एकताका लागि निर्णय गरिसकेको तर बल राजपाको कोटमा रहेको छ फर्काउँछ की राख्छ भन्न सकिदैन ।
राष्ट्रिय अध्यक्ष यादवले आजै माधव नारायण नगरपालिकामा निर्माण हुने पुलको शिलान्यास गरेका छन् ।
शिलान्यासपछि पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी भएका यादवले संघीय समाजवादी फोरम जिल्ला कार्य समिति रौतहटले सोही ठाउँमा आयोजना गरेको विशाल आम सभा तथा पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा सरिक भएका थिए ।
कार्यक्रममा स्वास्थ्यमन्त्री यादवसहित प्रदेश २ का भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी राज्यमन्त्री योगेन्द्र यादव, प्रदेश सांसद अब्बुल कलाम आजाद फूलबाबू, केन्द्रीय सदस्य विंदेश्वर यादव, प्रदेश सदस्य किरण साह, पूर्वजिल्ला संयोजक रामनिवास यादव, शोभा देवी साह, नगर प्रमुख वीरेन्द्र प्रसाद यादव लगायतका नेताहरुले आआफ्नो मन्तव्य राखेका थिए भने कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरी २५० जना संघीय समाजवादी फोरम नेपालमा प्रवेश गरेको जिल्ला उपाध्यक्ष श्यामविहारी यादवले जानकारी गराएका छन् ।
पार्टी प्रवेश कार्यक्रमपछि मन्त्री यादवले जिल्ला अस्पताल गौरको स्थलगत निरीक्षण समेत गरेका थिए ।